Adobe jilitaankii waa aalad video tafatirka xirfadeed iyo feature-hodan u saamaxaya in aad u jeedi videos Hollywood-style trailer galay in daqiiqo. In ugu dambeeyay jilitaankii Pro CS6, waxa ay sidoo kale ku darayaa taageero hooyo files AVCHD. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala badan oo weli ka cabanaya in ay dhibaato kasoo dajiyaan files AVCHD ay ku toogteen Adobe jilitaankii Pro. Waa maxay arrinta?
Sababtu waxa weeye in file AVCHD aad ku jiri kara codecs qaar ka mid ah waa in si dhib leh aqoonsan Adobe jilitaankii Pro ama ay xal aan qaybiyay si Adobe jilitaankii. Haddii ay dhacdo in aad u ordaan arrinta incompatibility sida galay, halkan waxaad heli doontaa in xal loo helo iyo degdeg ah.
Wondershare Video Converter Ultimate for Mac (Mountain Libaaxa / Libaaxa / Snow Leopard taageeray) waxaa loogu talo galay in la sameeyo oo dhan qaabab video caan ah oo la jaan qaada aad Adobe jilitaankii, iMovie ama Final Cut Pro. Sidaa daraadeed, idiin soo gudbin doonaa tayada ugu fiican ka dib markii uu qaab beddelidda, oo aan la kulmi doonaan dhibaato soo dejinta u sixiddiisa files AVCHD la Adobe jilitaankii mar dambe. Hadda free download version tijaabo iyo ku dhex socdo tilmaan faahfaahsan hoos ku qoran.
Free download AVCHD in Adobe jilitaankii Converter:
Fiiro gaar ah: Barnaamijkan waxa cross-madal. Its Windows u dhiganta: Video Converter waddaa in Windows 8/7 / XP / Vista. Waxay wadaagaan feature la mid ah, oo hoos ku hage qaadataa shaashada Mac ah.
Beddelaan AVCHD in Adobe jilitaankii tallaabo Pro talaabo
1. dejinta AVCHD videos aad
Barnaamijkan wuxuu si toos ah waxay kugu taageeri kartaa fiidiyo. Just isku xiro qalabka si Mac, ka dibna ay maamulaan barnaamijkan. Muddo ka dib, waxaad arki doonaa files fiidiyo aad, muujisay sida soo socota.
Wakhtigan, dooro faylasha aad rabto, ka dibna riix "Load" ikhtiyaarka si ay u dajiyaan.
2. Dooro qaab wax soo saarka aad ka jeeclaadeen
Riix icon qaab hoose ee Murayaad barnaamijka, waxa aad helaysaa farabadan oo fursado dhoofin file AVCHD aad. Waad fahmi kartaa in wmv, ama MPEG-2 waa qaab editable ee Adobe Premier. Si kastaba ha ahaatee, aad 1080P files AVCHD waxaa usualy encoded by H.264. Haddii aad doorato video ah soo saarka caadiga ah, waxay hoos u dhigi doontaa tayada badan. Sidaas darteed, Video Converter Ultimate for Mac bixisaa codec hooyo: ProRes ama DNxHD, taas oo loo hubiyo tayada ugu fiican oo ugu shugri u tafatirka ee Adobe Premier, iyadoo aan loo eegayn waad socda CS3 / CS4 / CS5 / CS5.5 ama CS6 ugu dambeeyay.
3. Start AVCHD in Adobe jilitaankii Pro diinta hadda
Hadda waxaad u timid inaad tallaabo la soo dhaafay, ka dhacay button loogu badalo ka furmkidoona AVCHD in ay diinta ka Adobe jilitaankii. Barnaamijkan waxa aad u waxtar fiican, iyo haddii aad file AVCHD orginial waxaa encoded by H.264, ka dibna aad dhaqaajiso karaa qaab beddelidda ultrafast, ilaa 30X ka dhaqso badan converters kale ee Mac.
Hadda, waxaad la files gediyay habsami leh ee Adobe Premier Pro qaban kara. Hambalyo!
> Resource > Video > Sida loo soo dejinta AVCHD in Adobe jilitaankii leh tayo wanaagsan